www.rapidshare.com ကနေ ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ချမလဲ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
www.rapidshare.com ကနေ ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ချမလဲ
ကဲခုတော့ လူပြောများနေတဲ့ Rapidshare.com ကနေ download ချပုံချနည်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာကလူတွေတော့ ဒီဆိုဒ်က download ချလို့ ရ ၊ မရတော့ မသိပါဘူး။ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေက ပြန်ပြောပြကြပါ။ စိတ်ရှည်တဲ့ မြန်မာက အသင်းဝင်တွေအတွက် အခြားအဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးသွားပါမယ်။ ခု စ တင်ရှင်းပြ ပါမယ်။ ပထမဥိးဆုံး ဒေါင်းလုဒ်ချမယ့် rapidshar.com က link တစ်ခုကို ယူလိုက်ပါမယ်။ ဥပမာပေါ့
" http://rapidshare.com/files/8558260/WingC.part1.rar " ကိုယူလိုက်ပါမယ်။ အဲဒါကို copy ယူပြီး Browser က Address Bar ပေါ်မှာ paste ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ဒီလိုမြင်ရပါမယ်။ အဲဒီမှာဝိုင်းပြထားတဲ့ " Free " ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်စာမျက်နှာကို ရောက်သွားပါမယ်။ အောက်ကပုံမှာ အနီရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့အတိုင်း Counter လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ့ counter က 0.0 ဖြစ်သွားရင် ခုလိုမြင်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Download ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် ခုလိုပေါ်လာပါမယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Save File ကို ရွေးပြီး ok နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် " Save As " box ပေါ်လာပါမယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ Desktop ပေါ်မှာပဲ save လိုက်ပါမယ်။ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်။
" Save " ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ခုလိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေတာ မြင်ရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် မိတ်ဆွေ အပိုင်းတစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်ချလို့ ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ rapidshare က Premium Account ရှိရင် တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဆက်တိုက် download ချလို့ ရပါမယ် ။ မဟုတ်ရင်တော့ တစ်ခု download ချပြီးတိုင်း ၁၅ မိနစ်စောင့်ရပါတယ်။ အဲဒီလိုမစောင့်ရပဲ ဘယ်လိုချရမယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် နည်းလမ်းရှာပြီး ထပ်မံတင်ပေးပါမယ်။ ခုတော့ ဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။ :)
Last edited by Aung Aung; 05-11-2008 at 06:04 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုဝင်း, ခင်မျိုးစစ်, မနက်ဖြန်, လူမုန်း, သောကမဲ့မိုးတိမ်, htun30, kooo333, linthuraaung, mars, nyi nge, zo
24-08-2007, 10:01 PM
ပြန်စာ - How to download from www.rapidshare.com ?
RapidShare ကိုဒေါင်းတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ကျွန်တော်ဆီမှာရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် Hard disk လေးကုန်သွားတော့ ပါသွားတယ်ဗျာ... အဲ့ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို အကုန်တောင်မစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူးဗျာ.. အဆင်မပြေတာတွေက များပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ donut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Rapidshare Premium Account မရှိဘဲ ဒေါင်းလုဒ်ချချင်ရင်တော့ လှည့်စားလို့ရတဲ့ နည်း တစ်နည်းရှိပါတယ် ...ကျွန်တော် ဒီနည်းသုံးပြီး နေ့တိုင်းနီးပါး ဒေါင်းနေမွှေနေတာပါ ... အသေးစိတ်ကို ဒီဖိုရမ်ထဲက ဒီနေရာမှာ -
သွားဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ် ... နည်းနည်းလေးတော့ စိတ်ရှည်ရမယ် ဒါပေမယ့် အလုပ်ဖြစ်တာကို လက်တွေ့ သိရပါလိမ့်မယ်ဗျာ ...
ခင်မျိုးစစ်, အောင်မိုးထွန်း, zo
အကိုလည်းဒီ rapidshare နှင့်ဒေါင်းရမယ်ဆိုရင် စိတ်ညစ်တယ် မြန်မြန်နည်းလမ်းရှာဦး၊ ပါရီမီယံအကောင့် ၀ယ်လိုက်လို့တော့မပြောနဲ့နော်။ ဒါကနောက်ဆုံးမှ စဉ်းစားမယ်လေ။
ကိုမီးနဂါးတို့လို direct internet connection ရတဲ့သူတွေအတွက် rs ကနေ အကန့်အသတ်မရှိ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိပါတယ်။
Rapidshare ကသူ့ဆီက ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနေတဲ့စက်တွေကို စက်တွေရဲ့ IP Address မှတဆင့် မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က တစ်ခါဒေါင်းလုတ်ချပြီးတိုင်း Ip
Address ကို ပြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ RS ကိုလှည့်စားမှာပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Firefox -> Tools -> Clear Private Data... -> Clear Cookies လုပ်ပါ။
ပြီးရင် Firefox ကထွက်လိုက်ပါ။ ထွက်ပြီးရင် Start Menu က Run... ကို နှိပ်ပါ။ Run box ပေါ်လာရင် cmd လို့ရိုက်ပါ။ command window ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီမှာ...
ipconfig /all လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ကျနော်တို့စက်ရဲ့ ip address အပါအ၀င် configration တွေကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ.. ip address ကိုမှတ်ထားပါ။ ဥပမာ - 131.238.18.01
ipconfig /release လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ip address ကော၊ ကျန်တဲ့ဟာတွေပါ 0.0.0. ဆိုပြီး ဖြစ်သွားရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ operation failed ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာပြီး ကျနော်ပြောသလိုမပြောင်းရင် ဒီနည်းကိုဆက်ပြီးကြိုးစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ့် internet connection ဟာ direct connection မဟုတ်ဘူးလို့ သဘောပေါက်ရပါမယ်။
ipconfig /renew လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ခဏစောင့်ပြီးရင် ကိုယ့်စက်အတွက် ip address အသစ်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီ ip address ကို စောစောက လိပ်စာအဟောင်းနဲ့ ပြန်တိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ မတူဘူးဆိုရင် ရပါပြီ။
အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ Firefox ကိုပြန်စပြီးနောက်ထပ် rs link တစ်ခု ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
ဒီနည်းကို မြန်မာအပါအ၀င် ip address အသေတစ်ခုတည်းထားသုံးတဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးလို့မရပါဘူး။ ( မြန်မာပြည်ကလူတွေ rs ကိုအခမဲ့သုံးဖို့ကတော့ ကိုအဲဗားရေးထားတဲ့နည်းလမ်းကလွဲလို့ ဒီ့ပြင်နည်းလမ်း မတွေ့မိပါဘူး။ )
Direct connection ဖြစ်သော်လည်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ Router များ၊ Firewall များအောက်မှ အင်တာနက်လိုင်းဝေမျှသုံးစက်များမှာလည်း မရပါဘူး။
တစ်ဦးတည်းသုံးတဲ့စက်ဖြစ်ပေမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်မျိုးမျိုးရဲ့ fix ip address ဖြင့်သုံးတဲ့စက်များမှာလည်း မရပါဘူး။ (ဥပမာ - Proxy Commander, Proxifier)
ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ RS အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ RS Tools တွေကလည်း အများစုကဒီနည်းကို ပရိုဂရမ်နဲ့လွယ်ကူအောင် ရေးထားတာများပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့တွဲသုံးနိုင်တဲ့ Firefox and Greasemonkey script (RS Bundle) ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်ဗျ။ နောက်မှထပ်ရေးပါမယ်။ သူက premium လိုပဲ Download Manger(Flashget) နဲ့ ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်တဲ့ function အပါအ၀င် သဘောကျစရာလေးတွေပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီနည်းလေးကိုပဲ စမ်းကြည့်ကြပါဦး။
Last edited by ကိုပိုင်; 25-08-2007 at 08:10 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, htun30, nanda, nyi nge, tartarlay18, Ye Aung, zo
ညီအဲဗားရေး အဲဒီလင့်က အဲရာဖြစ်နေပြီး အားရင်ပြန်တင်ပေးပါအုန်းနော်။
ရှိတဲ့သူတွေလည်း ပြန်မျှပါအုန်းနော်။ Rambo4ကိုဒေါင်းနေတာ ဖိုင်တစ်ခုဘဲ
26-01-2008, 09:52 PM
ပြန်စာ - www.rapidshare.com ကနေ ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ချမလဲ
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ.. အပေၞကလင့်ခ်က အရင်ဆိုက်အဟောင်းကလင့်ခ်ဖြစ်နေလို့ အလုပ်မလုပ်တော့တာပါ။ သူ့လင့်ခ်အမှန်ကို အောက်မှာကျနော်ပေးထားပါတယ်။ သွားကြည့်လိုက်ပါနော်။
Hacking RapidShare via Google
အကိုတို့ရေ...။ကျွန်တော် RS Premiun Account ကို Free လုပ်လို့ရတဲ့ site တခုတွေ့မိတယ်ဗျ။အဲဒီ site က အင်္ဂလိပ်သီချင်း ၊ software လေးတွေ ဒေါင်းလို့ ရတယ်ဗျ။ အဲဒီကနေ Rapid share ရဲ့ ပုံစံလေးတွေ့တော့ အဲဒါကို ဆက်ဝင်တော့ Get your Premiun account Free ဆိုပြီးတွေ့မိတယ်ဗျ။ အဲဒီ link ကိုဆက်ဝင်တော့ days ကို limit ထားတယ်လို့ တော့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်။ Register လုပ်တဲ့ Fact file လည်းကျရော အားလုံး Spanish ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အဲဒီ Link ကို တခါတည်း ရေးပေးချင်တာဗျာ။ ကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူး။ ကိုပိုင်ပြောတဲ့နည်းလေး စမ်းကြည့်ဦးမယ်။ RS က ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ သီချင်းတွေက Resolution တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ File size ကအရမ်းကြီးတယ်နော်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ bushyhair အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ်3ခုအတွက် 10 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကိုတို့ရေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ ကျလာတဲ့ rar ဖိုင်ကိုဘယ်လိုဖြည်ရမလဲ ။ ဖွင့်လို့မရလို့ ။ ဖြည်လို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ရှိရင် ကူညီပါဦးဗျာ.......
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ တွတ်ပီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by တွတ်ပီ
WinZip or WinRAR သုံးပြီး ဖြည်ရပါတယ်။ လိုချင်ရင် အောက်ကလင့်မှာ သွားယူပါ။ အဲ့မှာ ကိုပိုင်တင်ထားတာရှိပါတယ်။
www.aznv.tv ကနေ ဒေါင်းလုဒ်ချကြမယ် Ye Naung Websites များနှင့်ပတ်သက်၍702-10-2009 04:27 PM